मानिसले किन गुदामैथन गर्छन् ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
हामीले (दम्पती) आपसी सहमतिमा नियमित बिना कण्डम गुदामैथुन गर्दै आएका छौं र वीर्य स्खलन पनि मलद्वारभित्रै हुन्छ । सामान्य स्वास्थ्य स्थितिका बावजुदमा वीर्य मलद्वार भित्र स्खलन गर्दा संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन ? उचित जानकारीका साथै सम्भावित संक्रमण तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ ।
धेरैजसो मानिस यौनसम्पर्क भन्नाले योनि–लिङ्ग मैथुनलाई मात्र सम्झन्छन् । यौनसम्पर्क योनि–लिङ्ग मात्र नभई मुख–मैथुन वा गुदा–मैथुन पनि हुनसक्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा आफ्नो यौन साथीको गुदानलीमा लिङ्ग पसाई गरिने यौन सम्पर्कलाई गुदामैथुन भनिन्छ । धेरै मानिसले गुदामैथुनलाई नै समलिङ्गी यौन व्यवहार मान्छन् तर वास्तविकता के हो भने यो समान लिङ्गी व्यक्तिहरू तथा विपरीत लिङ्गी अर्थात पुरुष तथा महिलाको बीचमा पनि हुनसक्छ । वैवाहिक जोडीको बीचमा पनि यस्तो किसिमको यौनव्यवहार हुने तथ्य अहिले जग जाहेर छ र तपाईंको हकमा पनि यही भएको देखिन्छ ।
यो कुराको जवाफ पाउन सजिलो छैन, तर भिन्न भए पनि यसले प्राकृतिक यौन अभिव्यक्ति वा व्यवहार कै रूपमा मान्यता पाएको छ । फ्रायडले भने झैं मुख, यौनाङ्ग र गुदा क्षेत्र शरीरका अन्य अङ्गको तुलनामा बढी यौन संवेदनशील हुन्छन् । योनिको बाह्य भाग जस्तै गुदद्वारमा पनि प्रशस्त स्नायु हुन्छन्् । अर्को कुरा प्रोस्टेट अर्थात पौरुष ग्रन्थि गुदानलीको ठिक अगाडितिर हुने भएकाले गुदामैथुन गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा पौरुष ग्रन्थिको घर्षण हुन्छ । यी सबै कुराले गुदामैथुनलाई सुखमय बनाउन सहयोग गर्छ । गुदाक्षेत्रवाट यौन उत्तेजना तथा सुख प्राप्त गर्ने कुरालाई बलब िभचयतष्अष्कm भनिन्छ । लिङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिले यौन चरमसुख प्राप्त गर्नुलाई बलब ियचनबकm भनिन्छ । अर्कातिर कतिपय व्यक्तिले धेरै व्यक्तिले गर्ने कार्य भन्दा फरक किसिमको कार्य गर्दा एउटा विशेष प्रकारको आनन्द एवं रोमाञ्चता अनुभव गर्छन् । गुदामैथुन गर्दा कुनै वर्जित कार्य गरेको भनी मानसिक रुपमा रोमाञ्चको अनुभव हुन्छ ।
के कस्तो असर पर्ला ?
यदि आफ्नो यौन साथीमा कुनै संक्रमण छ भने अन्य यौनसम्पर्कमा जस्तै त्यो सर्ने सम्भावना हुन्छ, अर्को शब्दमा यौनरोगहरू गुदामैथुन गर्दा पनि सर्छन् । एचआईभी तथा अन्य यौनरोग सर्ने मामिलामा योनि–लिङ्ग मैथुनको तुलनामा गुदामैथुन बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसो हुनुको कारण गुदानलीमा योनिमा जस्तो रस निस्कँदैन र त्यसको भित्री छालापनि पातलो र कमलो हुने भएकाले यौन सम्पर्कले चोट पुर्‍याउँछ र सजिलै रोगको संक्रमण हुनसक्छ । यौन रोगका अतिरिक्त मलाशयमा अन्य रोगका जीवाणु पनि हुन्छन् । यदि दुवै जनामा कुनै यौन रोग छैन भने सर्ने कुरा भएन । कन्डम नै नलगाए पनि रोग नै छैन भने कसरी सर्छ त ?
तपार्इंलाई थाहै होला ठूलो आन्द्रा वा मलाशयमा भएको दिशालाई रोक्ने किसिमको संरचना नै मलद्वारमा हुन्छ । मलद्वारमा एउटा गोलाकार मांसपेशी हुन्छ जुन खुम्चिएको अवस्थामा यसले मलद्वारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्छ । यही मांसपेशीलाई प्रयोग गरेर उपयुक्त समय नभएसम्म हामी दिसा आउन रोक्छौं । यो मांसपेशी बन्द भएका बेला दिसा बाहिर आउन नसक्ने मात्र होइन, बाहिरबाट भित्र कुनै कुरा सजिलै पस्न पनि सक्दैन । यस्तो बेला लिङ्ग प्रवेश गराउन पनि गाह्रो हुन्छ र पीडा समेत हुन्छ । मांसपेशी संकुचित भएर मलद्वार बन्द भएको अवस्थामा जवरजस्ती लिङ्ग, औला वा अन्य वस्तु वारम्बार पसाइरहँदा मांसपेशी कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो भए दिसालाई रोकेर राख्न केही गाह्रो हुनसक्छ । त्यसैले उक्त मांसपेशीको कसरत गरे त्यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा समस्या केही कम हुन्छ ।
के कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्ला ?
गुदद्वारमा यसलाई राम्रोसँग बन्द गर्ने मांसपेशी हुन्छ । बाहिरी मांसपेशीलाई हामीले चाहे अनुरुप संकुचित गर्न वा खोल्न गर्न सक्छौं भने भित्री मांसपेशीलाई सजिलै त्यसो गर्न सकिँदैन । लामो अभ्यासबाट पनि एक हदसम्म भित्री मांसपेशीलाई खुकुलो गर्न सकिन्छ । गुदद्वार वा गुदानलीमा कुनै कुरा प्रवेश गर्न खोजे उक्त मांसपेशी वेस्सरी संकुचित हुन्छ र जवरजस्ती गर्न खोजे पीडा हुन्छ । गुदामैथुनलाई सुखमय बनाउन गुदद्वारमा लिङ्ग, औंला वा अन्य केही वस्तु ग्रहण गर्ने व्यक्ति र उसको गुदद्वारको मांसपेशी तनावरहित स्थितिमा हुनु आवश्यक छ । यस्तो स्थितिमा गुदा–मैथुन पीडा रहित हुन्छ । कतिपय व्यक्तिले गुदाक्षेत्रमा आफ्नो साथीले खेल्दा वा भनौं सुम्सुम्याउँदा औंला वा लिङ्गलाई गुदद्वारमा पसाउँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क छ भने तनाव कम हुनुका साथै मांसपेशीको संकुचन पनि कम हुन्छ र यौनआनन्द प्राप्त गर्न मदत मिल्छ । योनिमा जस्तो रस नआउने हुनाले पर्याप्त मात्रामा थप चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि K-Y Jelly वा पर्याप्त थुकको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिको वीर्य मलाशयमा स्खलित हुँदा खासै फरक पर्दैन । यो योनिबाट वाहिर आए जस्तै बाहिरतिर आउँछ र केही वाँकि भए दिसा गर्दा त्यसका साथै बाहिर निस्कन्छ ।
गुदद्वारमा बढी हानिकारक किटाणु हुने भएकाले संक्रमण नसरोस् भनेर कन्डमको नियमित तथा सही प्रयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । योनिमा जस्तो प्राकृतिक चिप्लोपन नहुने भएकाले कन्डमलाई बिगार नगर्ने किसिमको चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । गुदद्वारमा प्रवेश गराएको लिङ्ग योनिमा प्रवेश गराउनु हुँदैन, किनभने योनिमा ती जीवाणुवाट संक्रमण हुनसक्छ । कन्डम लगाएको स्थितिमा भने कण्डम नफेरी लिङ्ग योनिमा प्रवेश गराउनु हुँदैन । जीवाणुहरूलाई कम गर्न गुदद्वार वरिपरि मात्र सफा गरेर पुग्दैन भित्रतिर सफागर्ने डूसकै आवश्यकता पर्छ । यसो गर्दा पनि जीवाणु रहित बनाउन भने सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यौन प्रसाधनको प्रयोगको कुरा गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । आफ्ना यौनअंगहरूमा चोट नलागोस् भनी पर्याप्तमात्रामा चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ साथै ती प्रसाधनको सतह चिल्लो र सम्म परेको (घोच्ने, काट्ने सम्भावना नभएको) हुनुपर्छ ।
गुदद्वार वा मलाशयमा केही समस्या भए जस्तो लाग्यो, पीडा भैरह्यो वा दिसा गर्दा रगत जान थाल्यो भने चिकित्सकबाट जँचाउनु बेस हुन्छ ।